Actorylọ ọrụ 2050-3000mAh, Ndị na - eweta - China 2050-3000mAh Ndị na - emepụta ihe
Li-po Batrị 605264 2300mAh 3.7V Battery Cell maka Bluetooth Ọkà Okwu, ysmụaka, Electronic Robot, POS
Battery Batrị PLM-605264 3.7V 2300mAh batrị a na-emegharị emegharị na-eji ihe kachasị mma na ike dị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Batrị Li-po A7 2100mAh 3.7V Igwe batrị maka Bluetooth Ọkwa, Ihe egwuregwu, Igwe eletriki, Smart Mask
Batrị PLM-A7 3.7V 2100mAh na-ebugharị na-eji ihe kachasị mma nwere ikike dị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Batrị Li-po Batrị NP-FZ100 7.2V 2280mAh Batrị Cell maka POS, Igwefoto
Batrị PLM-NP-FZ100 7.2V 2280mAh na-agbanye ọkụ na-eji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Batrị Li-ion nke mbughari 2500mAh obere aka NFC mbadamba POS Mobile Terkwụ Tergwọ Terminal POS
Batrị PLM-XK-6019 3.7V 2500mAh na-agbanye ọkụ na-eji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Ngwaahịa: Ngwa: ysmụaka, Ngwaọrụ ,lọ, Ndị Ahịa Eletrọniki aha: PLM Asambodo: MSDS Nọmba Nlereanya: PLM- 674160-2P ​​Ebe Mmalite: Guangdong, China Arọ: 45g / PC typedị Batrị: Mpempe ọkụ polymer na-agbanye ọkụ: 3.7V ikike : 2700mAh Battery Size: 13.4mm * 41mm * 60mm Akwụkwọ ikike: 12 Months Iji: Bluetooth ọkà okwu, ụmụaka, POS, igwefoto Cycle ndụ: 1000Times Ihapu ọnụego: 2.7A Ngwugwu: Onwe Igbe Ngwugwu Otutu Nchedo ： 1.Dual MOS octagonal protection board. ..
Ihe Ngwaahịa: Ngwa: Ihe eji egwuri egwu, akụrụngwa ụlọ, Aha elekere elektrọnik ika: PLM Asambodo: Nọmba Model MSDS: PLM-594969 Ebe Mbido: Guangdong, China Ikike: 41.5g / PC batrị ụdị: batrị batrị polymer Recharge: Volta 3.8V: 2800mAh Batrị Size: 5.9mm * 49mm * 69mm Akwụkwọ ikike: 12 Ọnwa ole iji: igwe okwu Bluetooth, ihe ụmụaka, akụ ikike okirikiri: 500-1000Times nzipu: 2.8A ngwugwu: Akwukwo Igbe Nke Onu otutu Otutu ： 1.Dual MOS octagonal protection board 2 .Sh ..